Sarkaal katirsanaa Xukuumadda Somalia oo Muqdisho lagu dilay
MUQDISHO, Somalia - Koox hubeysan ayaa Muqdisho ku dishay nin la sheegay in uu ka mid ahaa shaqaallaha Wasaaradda Arrimaha gudaha ee xukuumadda Somalia.
Mas’uulka la dilay oo lagu Magacaabi jiray Cabdi Maxamed Cosoble(Cabdi Madoobe), ayaa waxaa labo nin oo hubeysan ay ku toogteen xilli uu ka baxayay hooygiisa oo ku yaalla Xaafadda Albaraka ee degmada Hodon, kuna sii jeeday goobtiisa shaqo.
Ciidamada Ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa gaaray goobta uu dilku ka dhacay, waxaana ay halkaasi ka sameeyeen howlgal aan cidna lagu soo qaban, iyadoo ay baxsadeen gacan-ku-dhiigliyaasha.
Kooxda Al-Shabaab ayaa durba sheegatay mas'uuliyadda dilka sarkaalkan katirsanaa Wasaaradda Arrimaha Gudaha Xukuumadda Somalia, waxaana dilkan uu qeyb ka noqonayaa dilal qorsheysan oo caasimadda ka dhacaya.
Mareykanka oo Muwaadiniintiisa uga digay inay u safraan Puntland
Caalamka 28.12.2018. 11:57
Qoraalka ayaa lagu sheegay in guud ahaan Soomaaliya ay ka jiraan dilal iyo afduub baahsan.
Xarunta UN-ka ee Muqdisho oo la weeraray iyo khasaaro ka dhashay [Sawirro]
Soomaliya 01.01.2019. 23:09
Hogaamiyeyaasha Daacish oo lagu beegsanayo Puntland
Puntland 30.01.2019. 13:39
Dad ku dhintay Roobab Xoogan Oo ka da'ay Soomaaliya [DAAWO]
Soomaliya 21.05.2018. 17:14
Tiradda dadka lagu dilay Soomaaliya 2016-2017 iyo magaalada ugu badan
Soomaliya 10.12.2017. 12:37
Gaas oo ku noqdey Garoowe xili uu wajahayo loolan siyaasadeed
Puntland 23.07.2018. 17:14
Daacish iyo Al-Shabaab oo dagaal qaraar ku dhexmaray gobolka Bari
Puntland 22.02.2019. 22:44
Farmajo iyo Khayre oo lagu casuumay shir looga hadlayo doorashada 13.07.2020. 03:40
Suudaan oo go'aan cusub kasoo saartay isticmaalka Khamrada 13.07.2020. 03:00
Doorashada 2020-21 oo la isku raacay in aysan noqon karin qof iyo cod 13.07.2020. 02:50
Madaxweyne Deni oo magacaabay guddi qaban-qaabinaya Aas Qaran 13.07.2020. 01:55
War-murtiyeed laga soo saarey shirka maamulada ee Dhuusamareeb 13.07.2020. 01:45
UK oo ka hadashay heshiiska xisbiyadda Somaliland ee doorashada 12.07.2020. 19:00